Dom » Gelitaannada lagu calaamadeeyay "meel"
Thanks to Exprivia iyo Sony, xogta ku saabsan xaalada dhulku waa aamin 100 sano
jibbaar, meel, dayax gacmeedyada, Sony
Adeegga keydinta xogta loogu talagalay dayax gacmeedyada loo adeegsaday barnaamijka Copernicus Sentinels ayaa shaqeynaya: xogta ka socota Wakaaladda Hawada Sare ee Yurub waxaa lagu duubi doonaa warbaahinta indhaha markii ugu horreysay Yurub waxaana la heli karaa tobanaan sano. Exprivia, oo la shaqeyneysa Sony, ayaa ...
NASA, Shiinaha, Miski iyo baradhada. Meeraha Cas waxay jirrabaysaa Buluugga
10 Janaayo 2021
Shiinaha, meel, March, NASA, SpaceX
Filimka daadanaya ee "The Martian", Mark Watney, oo ah saynisyahan cirbixiyeen ah oo keligiis ku haray Mars, ayaa hal dhibic ka bilaabay baradhada. Tani ma aha oo kaliya wax ku ool ah, badbaadada, laakiin sidoo kale astaamo - abuur iyo goyn ...
Sawirro qurux badan oo dhulka ah oo laga soo qaaday sagxadda saldhigga
ISS, meel, sawiro
Wax walba kor ka fiiri oo ka eeg quruxda dhulka dhinaca saxda ah. In yar ayaa nasiib u yeelatay inay tan la kulmaan. Saoichi Noguchi, si kastaba ha noqotee, maahan oo kaliya inuu la kulmo, laakiin wuxuu la wadaagaa adduunka. Eeg sawirradiisa. Saoichi ...
Dhismaha dhaadheer ee dayaxa? Mashruucii ugu horreeyay ayaa hadda la heli karaa!
degaanka, gumeysi, meel, dayax
Tartankii booska ayaa markale bilaabmay. Dhinac, waxaan rabnaa inaan ku degno Mars sida ugu dhaqsaha badan, dhanka kale, dhamaan wakaaladaha waaweyn waxay rabaan inay saldhig ka dhistaan ​​dayaxa. Waxaan haynaa mashruuc dhisme-hawleedkii ugu horreeyay ee laga dhisi karo halkaas. ESA waa ...
Ku saabsan sida ay u kulmeen laba godad madow oo kala duwan
meel, sayniska ee Poland
Bishii Abriil ee sanadkii hore, waxaa la arkay mowjadaha cuf isjiidadka oo muujinaya in laba god oo madow oo aad u kala fog ay isku biireen. Kooxda ay hogaaminayaan Poles waxay hada sharaxeen sida ay ku suurta gashay in haa ...
Waxaa jira lacag aad u tiro badan oo sugeysa macdanta
meel, sayniska, sayniska ee Poland
Adduunku wuxuu fiirinayaa dhinaca cosmos-ka, halkaas oo uu doonayo inuu ka soo saaro dayax iyo asteriyoodh qiimo leh, oo adag in la tiriyo. Bilaabashadu waxay horumariyaan tikniyoolajiyad casri ah, duulimaadyada wareega waxay si aad ah uga jaban yihiin, dowladduna waxay faafinayaan aragtiyo faa iido weyn. Ku saabsan taas ...
Shiinaha ayaa hawada sare u diray dayax gacmeed. Ujeeddo Sir
Deggen, oo aan faan badan lahayn, Shiinaha ayaa dayax gacmeed u diray hawada sare. Ujeedkiisa lama yaqaan, mana ogin goorta uu Dunida ku soo laaban doono. Si kastaba ha noqotee, Shiinaha waxay xaqiijineysaa in hadafkeedu yahay mid nabadeed. Sahaminta hawada ayaa sii socota ...
Mar labaad soo dhawoow! Xiddigta cirku ee duulay Crew Dragon waxay leeyihiin taariikh soo laabasho!
masduulaagii shaqaalaha, meel, SpaceX
Laba taariikho ayaa muhiim u ah safarka. Markaan safar u baxno iyo markaan ka soo nimaadno;) Waxaan tuhunsanahay soo noqoshada astronoutsku inaanay u faraxsanayn bilaabahooda. Laakiin way fiicantahay in la ogaado in ...
Astronauts-ka ISS waxay heli doonaan saaxiib cusub oo robotic ah
Cimon, ISS, meel, NASA, SpaceX
Markaad joogtid booska, waxaad dareemi kartaa xoogaa cidlo ah. Meesha ugu dhaw ee McDonald's 400 km, taas oo ilaa xad fog. Markaad sidan u fariisatid oo aad ku wareegtid, waxaa fiicnaan laheyd inaad qof la hadasho. Sidaa darteed ...